Semalt Explique Comment Kedu nke kacha mma nke SEO na Marketing Site Email
Email ahịa bụ ụzọ ọnụọgụ ụzọ nke ịmepụta aha nke ahịa na ịmepụta ezigbo mmekọrịta na ndị ahịa site na ịmepụta ọdịnaya mara mma, bara uru ma ọ bụ na-agagharị. Mgbe ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-achọpụta na ọ na-arụ ọrụ,
Artem Abgarian, onye na-elekọta onye ahịa nke Ọkachamara , explains the link between email marketing and benchmark and sharing tips on how to integrate them effectively.
Optimisation nke ahịa site na e-mail
Ndị na-eweta ọrụ nke messagerie proposes des adresses IP et une surveillance des activities. Na-asọpụrụ iwu CAN-SPAM na-eme ka ọrụ site n'aka ndị FAI. Nkwekọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eleba anya, ma ọ bụ ndepụta. Ụfọdụ ndị ọkachamara chọrọ iwepụta ozi ha dị ka ederede, ọ bụ ya mere ọ dị mkpa iji nweta nsụgharị ederede maka HTML ozi-e. Gradually progressing to promotional messages compared to starting with them reduces the chances of "retire."
ọdịnaya ga-enwe njikọ kpọmkwem na njem nke ibe, nke nwere ozi gbasara ngwaahịa, ọrụ na mgbasa ozi, ma jiri okwu ndị a. Idozi ọdịnaya iji gbakwunye ihe ndị nwere mmasị dị iche iche na-eme ka ọhụụ na ọhụụ dị mfe. Mgbe ị na-emekọrịta ihe na mgbasa ozi ọha na eze na nnukwu, ọ dị mkpa nke segmenter na-adabere na demographie, mmasị ma ọ bụ nke ntinye, n'ihi na nke a na-ebelata ọnụ ọgụgụ. SEO na-eduzi ndị ahịa na saịtị ndị nwere ihe ndị a na-edebanye aha na-enyere aka iji mepụta ndepụta. N'ikpeazụ, gụnyere ndị mgbasa ozi nke mgbasa ozi na ndị ozi nke ozi na-abanye na ndị na-enweta ọ bụla na nkwalite..
Tinye SEO na Email Marketing
Lee ụfọdụ ụzọ simples d'optimiser design design:
Best Practices SEO, dị ka njikarịcha nke securities, titres, ndepụta nke ihe, copie nke ozu na ihe odide ederede metụtara na ibe saịtị. Ihe oyiyi ahụ agaghị ebufe 600 pixels, n'ihi na ọtụtụ ndị na-ede akwụkwọ na-ederede ederede naanị na ihe osise ndị ahụ edozighị. Les balises de text Alt na ihe oyiyi na-enyere ndị ederede ịghọta ihe. Achọpụta "Nyochaa na ihe nchọgharị" kwesịrị igosi na ị ga-enwe ike ịgụta ozi-e.
Ndị nwere ike ịchọrọ na-emetụta ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji akwụkwọ ndekọ maka blogs ma ọ bụ ozi nchịkọta akụkọ na saịtị weebụ ebe ọ bụ na search engines nwere ohere. Ha na-ekwu na ị na-achọ ịchọta peeji nke dị ka URL mmasị, na na ihe niile ọdịnaya ga-agagharị.
E-Newsletter Archive bụ akwụkwọ niile nke akwụkwọ akụkọ niile e bipụtara na ihe niile gbasara ya. Ihe niile a na-ahọrọ kachasị na nchịkọta aha site na mkpado na onye ọ bụla na akwụkwọ ọ bụla.
Mobile Marketing chọrọ ndị tempụ iji nyochaa ndị na-arụ ọrụ nke ọma na-arụ ọrụ nke na-adabere na nke ọkpụkpọ mobile.
Labs Objects aident les readers to understand content of e-mail before even de l'ouvrir. Ha kwesiri ka enweghi ike igosi ya na ntinye aka ma kwesiri ibute ihe ndi adighi emeta.
Emails video. Ihe ndị a na-eme ka a na-akpọ ndị mmadụ na-enyere ndị mmadụ aka ịmatakwu ihe ha na-eme.
Suivi des campagnes en l'aide de Google Analytics.
E-mail adịghị egbochi ọdịnaya ọ bụla ha na-asọpụrụ iwu chọrọ CAN-SPAM et les gardent simples et courtes. Na-eche echiche na ha na-eme atụmatụ dị ka ọha na eze targets na le référencement en tête. N'ihe ndị a na-eme n'ọdịnihu na Google, njide ozi ga-adị mkpa maka ndị ọrụ, n'ihi na ndị ọrụ agaghị achọ ịga na Weebụ maka iji jide ọrụ ha.